काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेसम्म रु. १९ अर्ब ६५ करोड ३० लाख १२ हजार बेरुजु रहेको छ । त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा विगत ४० वर्षदेखि त्रिविमा विभिन्न शीर्षकमा बेरुजु रहेको रु. १९ अर्ब ६५ करोड ३० लाख १२ हजार उल्लेख छ ।
रु. १२ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार बेरुजु रहेकोमा २०७६ असार मसान्तसम्म रु. एक अर्ब ४७ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु फर्छौट गरिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा रु. ८६ करोड ९० लाख एक हजार समपरीक्षण गरिसकेको र ५८ करोड समपरीक्षणको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
आव २०७३–०७४ सम्मको बेरुजु र रु. १९ अर्ब ५३ करोड २२ लाख २८ हजार रहेकोमा २०७५ वर्षमा पुनः रु. दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु बढ्न गएको छ । त्रिविले २०७५ चैत मसान्तसम्म रु. एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख १६ हजार बेरुजु फर्छौट गरेको थियो ।
रजिष्ट्रार उप्रेतीले आव २०७३–७४ मा विकास निर्माणका कार्यथप भएको र परियोजना पूरा भएर पनि हस्तान्तरण नभएकाले बेरुजु बढेको बताए ।
त्रिविले बेरुजु रकममा आउँदो जेठ महिनाभित्र व्यक्तिगत पेश्की बुझाएमा पेश्की रकममा लाग्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । आव २०६९–०७० सालसम्म कायम भएको व्यक्तिगत पेश्की गत फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा पेश्की रकममा लाग्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा रु. १३ करोड पेश्की फर्छौट भएको थियो ।